Life in Fukuoka "Nepali"ブログ | LOVE FM - 76.1MHz FM RADIO STATION
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.110
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.108
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.107
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.106
【DJ को Choice "वर्षायाम/ गर्मी मौसमको लागि तयारी गरौं"】
आजकल एकदम न्यानो हुँदै आएको छ। अब चाँडै जुन महिना पनि आउनै लाग्योI त्यसपछि त पूर्ण रुपमा गर्मी, अनि धेरै पानी पर्ने वर्षायामको मौसम शुरु हुन्छ।
जापानको गर्मी मौसम र वर्षायामको विशेषताहरूको बारेमा जानकारी
जापानको गर्मीको विशेषता भनेको उच्च तापक्रम र अधिकतम आर्द्रता हुनु हो।
जापानमा जुनतिर धेरै बादल लाग्ने अनि धेरै वर्षा हुने गर्छ, जसलाई "चुयु अर्थात् वर्षायाम" भनिन्छ।
वर्षायामको शुरुवातलाई "चुयुइरी" भनिन्छ भने, अन्त्यलाई चाहिं "चुयुआके"।
क्षेत्र वा सो वर्षको आधारमा वर्षायामको अवधिमा फरक हुन्छ, तर फुकुओकामा " चुयुआके अर्थात् वर्षायामको अन्त्य" लगभग धेरैजसो जुलाईको मध्यतिर पर्छ।
वर्षायाम पछि, " मोउस्यो " अर्थात् चरम गर्मी भनिने, तापमान ३५ डिग्री भन्दा बढी हुने दिनहरु क्रमशः बढ्नेछन्।
सबैजनाले गर्मीको लागि तयारी गरि राखौं।
लू लाग्न र घामबाट डढाउनेदेखि सावधान होऔं!
जापानमा बस्नु हुँदा गर्मी मौसममा धेरैजसो सुनिने शब्द हो, "नेच्च्युस्योउ" अर्थात् लू लाग्नु । यो जापानमा एक किसिमको मौसमी रोग।
गर्मीको तन्तलापुर घाममा लामो समय बस्दा वा व्यायाम गर्दा, चक्कर लाग्ने, वाकवाकी लाग्ने, बेहोस हुने, टाउको दुख्ने जस्ता लक्षणहरु देखा पर्छन्। घर बाहिर मात्र नभई, घर भित्र पनि लू लाग्ने सम्भावना भएकोले सावधान रहनु जरुरी छ। अत्याधिक गर्मीबाट बच्न,
सकेसम्म चर्को घामबाट जोगिएर, छाँयामा वा शीतल कोठामा बस्ने गरौं।
बाहिर निस्कँदा, टोपी वा छाताको प्रयोग गरेर घामबाट जोगौं तथा कठिन व्यायाम गर्नबाट टाढा रहौं।
घाँटीलाई चिसो बनाउनको लागि गम्छा जस्ता लू लाग्नबाट बचाउने सामानहरूको प्रयोग गरौं।
ध्यानपूर्वक शरीरमा पानीको मात्रा आपूर्ति गर्ने गरौं।
* नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रमणको प्रभावको कारण, दैनिक रुपमा मास्क लगाउने हुनाले, आफूलाई तिर्खा लागेकोतिर ध्यान नजान सक्छ। गर्मीमा मास्क लगाउँदा अझ धेरै गर्मीको प्रभाब बढ्ने सम्भावना हुने भएकोले कृपया ध्यान दिनुहोला।
पछिल्ला वर्षहरूमा वर्षायामदेखि गर्मी मौसमसम्म बाढीको प्रकोप बढ्दै आएको छ। सावधानी तथा तयारी सम्बन्धि
वर्षायामको समयदेखि शरद ऋतुसम्म, जापानमा समुन्द्री आँधी नजिकिने र आउने धेरै हुन्छन्, जसले गर्दा भारी वर्षात्, बाढी, आँधीबेहरी, उच्च ज्वार भाटा आदि उत्पन्न हुन्छन्।
हालैका वर्षहरूमा, भारी वर्षाले क्युस्युमा शृङ्खलाबद्ध प्रकोपहरू निम्त्याएको थियो।
विपद् आईपर्दा कस्तो कदम चाल्नुपर्छ, कहाँ आश्रय लिनुपर्छ, आफू बस्ने क्षेत्रको खतरा संकेत नक्सा आदिको बारेमा अग्रिम रुपमा जानकारी राख्ने गरौं।
फुकुओका सिटिको साइट (https://www.city.fukuoka.lg.jp/bousai/bousaiforeigner.html)
बाट विपद् रोकथाम सम्बन्धि जानकारीहरु पाउन सक्नुहुन्छ।
फुकुओकाको पहाडी क्षेत्र, प्रमुख फलफूलहरु उत्पादन गर्ने क्षेत्रको रुपमा जापानभरि चिनिन्छ। "चेरी" फल मे महिनामा फल्ने लोकप्रिय फल होI फुकुओका प्रान्तमा रहेको चेरी फार्ममा चेरी फल टिपेर मनोरञ्जन लिन जोडीहरु, परिवारहरु आदि लगायत धेरै पर्यटकहरू जाने गर्छन्। फसल काटेको २-३ दिन पछिको चेरी बिना प्रशोधन खान मिल्छ भने, ताजा टिपेका चेरी बिशेष रूपमा स्वादिष्ट हुन्छ।
स्वादिष्ट चेरी पहिचान गर्ने केही तरिकाहरु छन्। जस्तै कि, फल ठूलो अनि पोष्ट भएको, बोक्रा नफातिएको, बाहिरी सतहमा नकोरिएको वा चिरा नपरेको। डाँठको भाग नओइलाएको।
यसलाई भण्डारण गर्दा, फ्रिजमाभन्दा पनि कोठाभित्रको शीतल ठाउँमा राख्ने। चिसो गर्न चाहनु भएमा, यसलाई खानुभन्दा २ घण्टा अगाडि जति फ्रिजमा राख्नु राम्रो हुन्छ।
हलुका सवारी साधन कर सम्बन्धि
यो फुकुओका शहरको सूचना हो।
मोटरबाईक वा हलुका कार भएकाहरुले, अप्रिल १ मा हलुका सवारी साधन कर तिर्नु जरुरी छ।
यदि तपाईंसँग मोटरबाईक वा हलुका कार छ भने, हुलाक मार्फ कर तिर्नका लागि सूचना आउन सक्छ, अवश्य पनि भित्र हेर्नुहोला। मे को ३१ सम्ममा कोन्भिनी, बैंक वा हुलाक मार्फत तिर्नुहोला।
यदि तपाईंले मोटरबाईक आदिको शहरी कर तिर्नु भएन भने, तपाईंको निवास कार्डको नविकरण गर्नमा समस्या पर्नुका साथै तपाईंको सम्पत्ति फुकुओका शहरले कब्जा गर्ने सम्भावना पनि छ।
नबुझेको कुरा भएमा वा कर तिर्न गाह्रो भएमा, वार्ड अफिसको काउन्टरमा परामर्श लिनु होला।
१८ वटा भाषाहरुमा, फोनमार्फत परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर, ०९२-७५३-६११३ ।
यो नम्बरबाट, शुरुमा दोभाषे सेन्टरमा फोन लाग्छ, त्यसपछि वार्ड अफिसमा सम्पर्क हुनेछ।
तपाईंले कुरा गर्ने भाषा, बस्ने वार्ड अनि करबारे तपाईंले बुझ्न चाहेको कुरा भन्नुहोला।
【अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवस】
मे महिनाको १५ तारिक "अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवस" ​​हो।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष मे १५ लाई विश्वभरका देशहरूमा पारिवारिक समस्याहरूप्रति जागरुकता बढाउन र परिवारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुमा काम गर्ने क्षमता बढाउन अवसरको रुपमा तोकिएको दिन हो ।
जापानमा बस्दै गर्दा, काम वा पढाई विशेषले त्यति नेपाल जान पाईराख्नु भएको छैन होला, तर आजकल इन्टरनेट, ईमेल, भ्वाइस कल वा भिडियो कल आदिको सुबिधाको कारण सजिलै आफ्नो परिवारजनसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ।
हुन पनि, सबैभन्दा नजिकको र महत्त्वपूर्ण भनेको नै परिवार हो। हामीले जति बाआमा र परिवारको बारेमा सोच्छौं, त्यो भन्दा बेसी उहाँहरुले हाम्रो बारेमा पिर लिनु हुन्छ।
परिवारमा सबै ठिक छ कि छैन, केहि समस्या आईपर्यो कि भनेर मनमा कुरा खेल्दा, आफ्नो परिवारलाई सम्पर्क गरि कुराकानी गर्ने गरौँ। आफ्नो घरपरिवार तथा साथीभाईहरुसँग नियमित रुपमा सम्पर्क राख्ने गरौँ!
यस पटक फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल फाउण्डेसनको सूचना रहेको छ।
टोल फ्री नम्बर उपलब्ध गरिएको छ !
कुनै शुल्क बिना फोन गर्न सकिने नयाँ फोन सेवा उपलब्ध गरिएको छ।
नम्बर रहेको छ, ०१२०-६६-१७९९ । पहिले जस्तै, बिभिन्न भाषाहरूमा यो सेवा उपलब्ध छ।
कृपया नहिचकिचाइकन सम्पर्क गर्नुहोस्!
"LINEआधिकारिक Accountबनाइएको" बारे सूचना
"Fukuoka City Consultation Support Center for Foreign Residents" को LINE आधिकारिक Account बनाइएको छ।
फाउन्डेशनको कार्यक्रमहरू तथा तपाईंहरुको दैनिक जीवनका लागि उपयोगी जानकारीहरु आदि यसमा पठाउने गर्छौं।
यस अतिरिक्त, LINE कल प्रयोग गरि टेलिफोन मार्फत् जीवनयापन सम्बन्धि परामर्श तथा निःशुल्क विशेष परामर्शहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
टेलिफोन दोभाषे सेवामा बहुभाषी सेवा पनि सम्भव छ।
च्याटमा सेवा उपलब्ध नहुने भएकोले कृपया ध्यान दिनुहोला।
Text मार्फत् परामर्श गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया "फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल फाउण्डेसनको" वेबसाइटमा रहेको सम्पर्क फारम प्रयोग गर्नुहोस्।
LINE मा Friend add गर्दा, कृपया ID "@ 111dhfna" राखी खोज्नुहोस्।
ट्यूटर प्रोग्रामको परिचय
जापानी भाषामा लेखिएको स्कूलको पत्रहरू वा मेल अर्डर मार्फत खरिद गर्नुभएको सामान फिर्ता गर्न चाहनु भएको समयमा जापानी भाषामा कारण व्याख्या गर्न आदि जस्ता; जापानी भाषा वा दैनिक जीवनमा समस्या भईरहेका विदेशीहरूको सहयोग गर्ने "ट्यूटर प्रोग्राम" को परिचय दिनेछु।
फाउण्डेसनमा रजिस्टर भएका स्वयंसेवकहरु प्रत्यक्ष वान् टु वान् ट्यूटर हुने, र उहाँहरुसँग अनलाइनमा सरल अनुवादका लागि अनुरोध तथा दैनिक जीवन सम्बन्धि सल्लाह माग्न सक्नुहुन्छ।
ट्यूटरसँग अनलाइन कुराकानी गर्न सक्ने, फुकुओका शहरमा बस्नु हुने विदेशी महानुभावहरु, जो कोहीले पनि यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्रयोग शुल्क निःशुल्क हो।
प्रयोग गर्ने तरिका आदि अधिक जानकारीको लागि, कृपया फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल फाउण्डेसनको होमपेज वा फोन नम्बर ०१२०-६६-१७९९ मा सम्पर्क राख्नुहोला।
सोमबारदेखि शुक्रबार ९:०० देखि ६:०० बजेसम्म कल स्वीकार गरिन्छ। अवश्य सम्पर्क राख्नुहोला।
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य（医療・保健） , अन्य（その他）
【माछा खाने पसल】
फुकुओका सिटि, शहर भए पनि समुन्द्र र पहाडको नजिक भएकोले यहाँ विभिन्न सामग्रीहरु पाउन सजिलो छ।
फुकुओका शहर रामेन र उडोनका लागि देशभर प्रसिद्ध छ। के तपाईंहरुले खानु भयो त ?
यद्यपि, फुकुओका शहरमा माछाका परिकारहरू पनि धेरै स्वादिष्ट छन्!
प्रति १००,००० जनसंख्यामा माछा पसलको अनुपातलाई हेर्ने हो भने, फुकुओका शहर जापान भरिमा प्रथम स्थानमा छ।
फुकुओका शहरमा नागाहामा सेन्ग्यो इचिबा (नागाहामा माछा बजार) छ र यहाँबाट ताजा माछाहरू जापानभर पठाइन्छ। बजारभित्र रेस्टुरेन्ट पनि छ जहाँ, तपाईं सुशी र टेम्पुरा जस्ता जापानी खानाको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
ओसाशिमी जस्ता काँचो माछा नखानेहरुका लागि, फ्राइड टेम्पुरा खानु उपयुक्त होला।
फुर्सदको समयमा एकपटक नागाहामा माछा बजार घुम्दा कसो होला!
नयाँ कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको सूचना
फुकुओका शहरमा नयाँ कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपका लागि ईच्छुक सम्पूर्ण व्यक्तिहरुले ढुक्क भएर खोप लगाउन सुनिश्चितका लागि काम भईरहेको छ।
दोस्रो पटकको खोप लिईसक्नु भएका, १२ वर्षका वा सोभन्दा माथिका फुकुओका शहरको नागरिकहरुलाई, फुकुओका शहरले तेस्रो पटकको खोप लिनका लागि खोप कुपन हुलाक मार्फत् पठाईएको छ।
खोप कुपन पाउनुभएपछि, बुकिंग साइट वा खोप सेन्टरमा बुकिंग गर्न सकिने हुनाले, कृपया खोप कुपन नपाउन्जेल प्रतिक्षा गर्नुहोला।
तर, दोस्रो पटकको खोप लगाएको लगभग ६ महिनापछि पनि खोप कुपन पाउनु भएन भने, कल सेन्टरमा फोन गर्नुहोला।
५ देखि ११ वर्षका बालबालिकालाई पनि खोप दिईरहेको छ ।
फुकुओका शहरमा खोप सम्बन्धि परामर्श लिन र बुकिंग गर्न सकिने कल सेन्टरको फोन नम्बर रहेको छ, ०९२-२६०-८४०५ । हरेक दिन बिहान ८ :३० देखि बेलुका ५ :३० बजेसम्म कल स्वीकार गरिन्छ। अंग्रेजी, चाइनिज, कोरियाली, नेपाली, भियतनामी आदि ७ वटा विदेशी भाषाहरूमा यो सेवा उपलब्ध छ।
बसोबास कर छुट भएका परिवारहरूका लागि आपतकालीन विशेष अनुदान रकमको सूचना
नयाँ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमको प्रभाव लामो समयसम्म रहिआएको कुरालाई मध्यनजर गरि, जापान सरकारले जिविकोपार्जनमा टेवा पुर्‍याउन, बसोबास कर छुट भएका परिवारहरूलाई प्रति परिवार १,००,००० येन नगद उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
भुक्तानीका लागि योग्य भएका परिवारहरुलाई फुकुओका सिटि नगरपालिकाले अनुदान रकमको विवरण वा पुष्टि गर्नुपर्ने बिषयवस्तुहरु उल्लेखित पुष्टिकरण पत्र पठाएको छ।
अनुदान रकम प्राप्त गर्नका लागि प्रक्रियाको आवश्यक पर्छ।
पुष्टिकरण पत्र प्राप्त गर्नुहुने महानुभावहरुले विवरणको राम्ररी जाँच गरि, पुष्टिकरण जारी भएको मितिबाट ३ महिना भित्र फिर्ता पठाउनुहोस्।
अनुदानरकमको बारेमा परामर्श लिन सकिने कल सेन्टरको फोन नम्बर रहेको छ, ०१२०-०१८-०९२।
सोमबारदेखि शुक्रबार, बिहान ९:०० देखि बेलुका ६:०० बजेसम्म कल स्वीकार गरिन्छ।
अंग्रेजी, चाइनिज, कोरियाली, नेपाली, भियतनामी, स्पेनिश र पोर्चुगिज भाषाहरूमा परामर्श लिन सकिन्छ।
【विश्व पृथ्वी दिवस】
हरेक वर्ष अप्रिल २२ तारिख विश्व पृथ्वी दिवस हो। पृथ्वी र वातावरणको बारेमा मनन गरेर, सुन्दर प्राकृतिक वातावरणप्रति आभार व्यक्त गर्ने दिन हो।
यो विचार सन् १९६९ मा आयोजना भएको युनेस्कोको सम्मेलनबाट आएको थियो। लगत्तै अर्को वर्ष,
संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिनेटर नेल्सनले अप्रिल २२ मा वातावरणीय मुद्दाहरूमा बहस गर्न बैठक बस्न आह्वान गर्नुभएको घटनाबाट विश्व पृथ्वी दिवस शुरु भएको थियो।
जापानमा सन् १९९० मा प्रथम पटक विश्व पृथ्वी दिवस शुरु भएदेखि, हरेक वर्ष यस दिन प्रत्येक क्षेत्रमा विश्व पृथ्वी दिवसका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू आयोजना हुँदै आईरहेको छ।
SDGs (दिगो विकासका लक्ष्यहरू) मा केन्द्रित भई लाग्न आवश्यक अहिलेको युगमा, दैनिक जीवनयापनमा वातावरणको लागि केहि गर्न सकिन्छ कि भनेर विचार गरि हेरौं।
उदाहरणका लागि, अनावश्यक रुपमा बत्तीहरु नबाल्ने, फोहोर कम गर्ने आदि जस्ता सरल रुपमा गर्न सकिने दैनिकी कुराहरुबाट शुरु गरि हेर्दा कस्तो होला?
फोहर फ्याँक्ने नियम सम्बन्धी
फुकुओकामा नयाँ जीवनयापन शुरु गर्नुहुने धेरै संख्यामा हुनुहुन्छ होलाI
यसपटक, फोहर फ्याँक्ने नियम सम्बन्धी सूचना रहेको छI
फुकुओकामा फोहरलाई तीन किसिममा विभाजन गरी फ्याँक्ने गरिन्छ।
जल्ने फोहर, खाली सिसाको बोतल/प्लास्टिकको बोतल, अनि नजल्ने फोहर गरी ३ किसिमका हुन्छन्I
कन्भिनियन्स स्टोर वा सुपर मार्केटमा बेची राखेको, फुकुओका शहरको फोहर-फाल्ने-झोला प्रयोग गरेर फोहोर फाल्ने गर्नुहोस्।
जल्ने फोहरको लागि, रातो रंगको फोहर-फाल्ने-झोला होI
कच्चा फोहोर, कागज, कपडा, प्लास्टिक आदि फाल्ने बेलामा, रातो झोला प्रयोग गर्नुहोस्I
खाली क्यान र गिलास जस्तालाई, नजल्ने फोहरको रुपमा, निलो फोहर-फाल्ने-झोलामा फाल्नुहोस्I
खाली सिसाको बोतल र प्लास्टिकको बोतल फाल्नको लागि, पहेंलो रंगको फोहर-फाल्ने-झोला प्रयोग गर्नुहोस्I
बसोबास गर्ने ठाउँ अनुसार फाल्ने दिन तोकिएको हुन्छ।
जल्ने फोहर हप्तामा २ पटक, खाली सिसाको बोतल/प्लास्टिकको बोतल र नजल्ने फोहर चाहिँ महिनाको १पटक संकलन हुन्छI
फोहर मध्यरात संकलन हुनेभएकोले अँध्यारो भएदेखि रातिको १२ बजे सम्ममा, फोहर फाल्ने निश्चित ठाउँमा फाल्नुहोस।
फुकुओका शहरको आधिकारिक LINE ID मा Friend add गरेर, तपाईंको ठेगाना राख्नु भयो भने, LINE बाट फोहोर फाल्ने दिनको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराईन्छI
फाल्न चाहनुभएको फोहोरको नाम राख्नुभयो भने, फोहोरको किसिम पनि जान्न मिल्ने भएकोले यो एकदम उपयोगी छI
एउटा झोलामा नअट्ने ठूला आकारको फोहर वा भारी फोहरलाई, ठूला आकारको फोहरको रुपमा फाल्नुहोस्I
ठूला आकारको फोहरका लागि, फोन, इन्टरनेट, वा LINE द्वारा ‘फुकुओका शी सोदाई गोमी उकेचुके’ मा सम्पर्क गरेर संकलन गराउन सक्नुहुन्छ।
कृपया शुल्क, फोहोर फाल्ने ठाउँ, मिति, इत्यादि जाँच गरेर फोहोर बाहिर राख्नुहोस्।
फोनमार्फत सम्पर्कका लागि, ठुलो आकारको फोहर फाल्ने सेन्टरको फोन नम्बर, ०९२-७३१-११५३ I
१८ वटा भाषाहरुमा यो सेवा उपलब्ध छI
【फुकुओका शहरको यातायातको परिचय】
यस वसन्तदेखि फुकुओका शहरमा आउनु भएका सबैजना, यहाँको नयाँ जीवनयापनमा भिज्नु भयो कि भएन?
कसरी फुकुओका शहरमा आवतजावत गर्दैहुनुहुन्छ होला?
साइकल आवतजावत गर्न सस्तो र सुविधाजनक साधन हो, तर धेरै मानिसहरू भएको ठाउँमा साइकल दोहोर्याएर हिंड्नु जस्ता शिष्टाचारको पालना गर्ने गरौं। साथै, साइकल पार्किङ गर्ने ठाउँ बाहेक अन्य ठाउँमा साइकल पार्क नगरौं।
फुकुओका शहरभित्र आवतजावतका लागि निशितेचु बस र सबवेको प्रयोग गर्न सुझाव दिईन्छ ।
विभिन्न स्थानहरूमा बस स्टपहरू र सबवे स्टेशनहरू छन्।
सस्तो अनि, साइकल पार्क गर्न चिन्ता पनि लिनु पर्दैन।
यदि धेरै मानिसहरू वा सामानहरू छन् भने, तपाईं ट्याक्सी लिन सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं पैसा पनि बचाउन चाहनुहुन्छ अनि, आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्न चाहनुहुन्छ भने, हिड्नुहोस्! यो नै सबैभन्दा उत्कृष्ट उपाय हो।
‘विदेशीहरुका लागि आप्रवासन, आवास र राष्ट्रियता सम्बन्धि परामर्श’ को परिचय
आवासको स्थिति र आवास अवधिको बारेमा, तपाईंले केही कुरा नबुझेको छ कि?
काउण्टर दिउँसो ३:३० बजेसम्म खुल्ला रहनेछ।
अंग्रेजी, चाइनिज र जापानी भाषामा परामर्शका लागि अग्रिम बुकिंग गर्न आवश्यक छैनI
विस्तृत जानकारीका लागि, निःशुल्क फोन सेवा नम्बर, ०१२०-६६-१७९९ मा सम्पर्क गर्नुहोलाI
सोमबारदेखि शुक्रबार ९:०० बजेदेखि १८:०० बजेसम्म कल स्वीकार गरिन्छ I
कानूनी परामर्शको परिचय
अर्को जानकारी रहेको छ, फुकुओकामा बस्नु हुने विदेशीहरूका लागि निःशुल्क “कानूनी परामर्श” को बारेमा।
“कानूनी परामर्श”, हरेक महिनाको पहिलो शनिबार, बिहान १०:३० बजेदेखि दिउँसो १:३० बजेसम्म र, तेस्रो बुधबारको दिउँसो १:०० बजेदेखि ४:०० बजेसम्म, परामर्श अवधि ४५ मिनेट, बुकिंगको आधारमा वकिलद्वारा निःशुल्क परामर्श प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छI
भाषा अनुवादकको आवश्यकता भएमा, निःशुल्क अंग्रेजी अनुवादकको व्यवस्था गरिदिने भएकोले बुकिंग गर्नुहुँदा भन्नुहोलाI
बुकिंग, फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल फाउण्डेसनको होमपेजमा रहेको बुकिंगफारम मार्फत् गर्न सक्नुहुन्छI
पहिले आउनेलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएकोले सर्वप्रथम फोनमार्फत परामर्शको निम्ति बुकिंग गर्नका लागि सुझाब दिन्छौंI
निःशुल्क फोन सेवा नम्बर, ०१२०-६६-१७९९ मा सम्पर्क गर्नुहोलाI
सोमबारदेखि शुक्रबार, बिहान पौने ९ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म कल स्वीकार गरिन्छI
जुनसुकै परामर्श पनि, गोपनीयता कडा पालन गर्ने भएकाले ढुक्क भएर परामर्श लिनुहोस्I
नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रमण रोक्नको लागि, यहाँ आउनुहुँदा सकेसम्म मास्क लगाउन र हात धुनका लागि अनुरोध गर्दछौंI
तेस्रो वर्षमा प्रवेश भएपछिको आजको पहिलो कार्यक्रममा, मेरो छोटकरीमा परिचय दिन गईरहेकी छु। मेरो नाम सरिता महर्जन हो, नेपालको काठमाडौँबाट।
फुकुओका आएको ७ बर्ष भयो। Kyushu University बाट Urban Planning मा PhD गरि हाल Love FM मा DJ को सँगसँगै, Professional Architect को रुपमा, जापानी डिजाईन् कम्पनीमा पनि काम गर्दैछु।
मलाई पुरानो जापानी शैलीको भवनहरुको अध्ययनको साथसाथै नयाँ शैलीको डिजाईन् गर्न मनपर्छ। जापानी खाना मलाई असाध्यै मनपर्छ, त्यसमा पनि फुकुओकाको तोन्कोचु रामेन र ओडेन साह्रै मनपर्छ। फुकुओकामा, Dazaifu र Ohari Park चै मलाई घुम्न र फुर्सदको समय बिताउन मनपर्ने ठाउँहरु हुन्।
मेरो छोटो परिचय यति नै। आगामी दिनहरुमा पनि, दैनिक जीवनमा उपयोगी जानकारी र रमाइला विषयबस्तुहरू निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछु । कृपया कार्यक्रम सुनिदिनु होला।
दोस्रो पटकको खोप लिईसक्नु भएका, १८ वर्षका वा सोभन्दा माथिका फुकुओका शहरको नागरिकहरुलाई, फुकुओका शहरले तेस्रो पटकको खोप लिनका लागि खोप कुपन हुलाक मार्फत् पठाईएको छ।
दोस्रो पटकको खोप लगाएको लगभग ६ महिनापछि पनि खोप कुपन पाउनु भएन भने, कल सेन्टरमा फोन गर्नुहोला।
५ देखि ११ वर्षका बालबालिकालाई पनि खोप लगाउन शुरु गरिएको छ ।
११ वर्षदेखि उमेरको क्रम अनुसार खोप कुपन हुलाक मार्फत् पठाईएको छ।
फुकुओका शहरमा खोप सम्बन्धि परामर्श लिन र बुकिंग गर्न सकिने फोन नम्बर रहेको छ,
०९२-२६०-८४०५ । हरेक दिन बिहान ८ :३० देखि बेलुका ५ :३० बजेसम्म कल स्वीकार गरिन्छ।
अंग्रेजी, चाइनिज, कोरियाली, नेपाली, भियतनामी आदि ७ वटा विदेशी भाषाहरूमा यो सेवा उपलब्ध छ।
बसोबास करको दायराभित्र नपरेका र भुक्तानीका लागि योग्य भएका परिवारहरुलाई फुकुओका सिटि नगरपालिकाले अनुदान रकमको विवरण वा पुष्टि गर्नुपर्ने बिषयवस्तुहरु उल्लेखित पुष्टिकरण पत्र पठाएको छ।
पुष्टिकरण पत्र प्राप्त गर्नुहुने महानुभावहरुले विवरणको राम्ररी जाँच गरि, पुष्टिकरण जारी भएको मितिबाट ३ महिना भित्र फिर्ता पठाउनुपर्छ।
अनुदानरकमको बारेमा परामर्श लिन सकिने फोन नम्बर, ०१२०-०१८-०९२ हो।
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.105
DJ को Choice 【ओहानामी・ कार्यक्रमको नयाँ बर्षको सन्देश】
जापानमा मार्चको अन्त्यदेखि अप्रिललाई साकुरा फुल्ने मौसमको रुपमा चिनिन्छ।
पार्क वा विद्यालय, सडक छेउका रूख, घरका बगैंचा जस्ता धेरै ठाउँहरूमा साकुरा फूल हेर्न सक्नुहुन्छ।
साकुरा फूल फुल्ने अवधि धेरै छोटो हुन्छ, १-२ हप्ता। छोटो समय भए पनि सुन्दर साकुरा फुलेको हेरेर आनन्द लिन मन लाग्छ नि होइन।
・ < ओहानामी अर्थात् साकुरा फूल फुलेको हेर्ने मेलाको बारेमा>
जापानमा बस्ने मानिसहरूका लागि साकुरा फूल फुलेको हेर्ने भनेको परम्परागत र लोकप्रिय कार्यक्रम हो।
ओहानामीमा, साथीभाई वा परिवार, वा सहकर्मीहरूसँग साकुराको रूख मुनि बसेर खाने, रक्सी पिउने र फोटो खिच्ने जस्ता मनोरञ्जन गरि समय बिताउने गर्छन्।
साकुरा वा ओहानामीको चलन जापानमा विशेष छ।
फुकुओका शहरमा पनि साकुरा फूल फुलेको हेर्ने धेरै ठाउँहरू छन्।
・ <फुकुओका शहर नजिकैको साकुरा फूल फुलेको हेर्ने ठाउँहरूको बारे>
फुकुओका शहरभित्र साकुराका लागि प्रसिद्ध ठाउँहरु, माइजुरु पार्क, निशी पार्क आदि हुन्।
साथै, फुकुओका शहर नजिकैको साकुरा फूल हेर्ने ठाउँहरूको बारेमा, विदेशीहरूका लागि "उपयोगी" जानकारी प्रदान गर्दै आइरहेको " Fukuoka Now" मा विशेष लेख राखिएको छ।
फोटोहरु सहित बुझ्न सजिलो भएकोले पक्कै पनि एक पटक इन्टरनेटमा फुकुओका साकुरा वा ओहानामी गाइड २०२२ भनेर खोजि हेरी, आफ्नो परिवार वा साथीभाई वा प्रेमि-प्रेमिकासँग साकुरा मेलामा घुम्न जाँदा कसो होला!
साकुराको मनोरञ्जन लिन, मलाई मन पर्ने ठाउँहरुमध्ये तेन्जिन सेन्ट्रल पार्क पनि एक हो। तेन्जिनबाट नजिकै यो पार्कमा, बसेर खान मिल्ने गरि टेबलबेन्चहरु पनि छन्, तर साकुरा रुखको मुनि भुइँमा शीट ओछ्याएर बस्नुको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ नि होइन ! यो ठाउँमा सानो खोला पनि छ। खोला किनारमा हिड्ने पेटी छ, अनि त्यहाँबाट हिड्दाको साकुरा फूलको सुगन्ध र दृश्य अति नै मनमोहक हुन्छ। तपाईंहरु यदि यो ठाउँमा साकुरा हेर्न जानु भएको छैन भए, पक्कै पनि एक पटक जानु होला। रमाइलो गर्नुहोला।
< यस बर्ष पनि सान्मिचु (तीन कुरा बन्द) बाट टाढा रही ओहानामीको आनन्द लिऔं! ＞
यस बर्ष पनि नयाँ कोरोनाभाइरसको प्रभावको कारण सान्मिचु (तीन कुरा बन्द) बाट टाढा रही, ओहानामी अर्थात् साकुरा फूलको आनन्द लिऔं।
सकेसम्म कम मान्छेको संख्यामा, छोटो समयमा भीड नहुने गरि गरौं, अनि फर्कंदा आफ्नो फोहोर आफैं बोकेर जाने जस्ता नियमको पालना गरि साकुरा मेलाको आनन्द लिऔं।
पक्कै पनि यो मौसममा मात्र हेर्न सकिने सुन्दर फूल साकुराको दृश्य अवलोकन, स्मरणीय रहनेछ।
・ < कार्यक्रमको नयाँ बर्षको सन्देश>
वर्ष २०२० को अप्रिलमा शुरु भएको यो कार्यक्रम " Life in Fukuoka", अर्को हप्ताबाट तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्नेछ! प्रसारण वा पोडकास्टहरू सुनि दिनुहुने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
फुकुओकामा बस्नु हुने विदेशीहरूका लागि दैनिक जीवनमा उपयोगी जानकारी र रमाइला विषयबस्तुहरू आउँदा दिनहरुमा पनि हामी निरन्तर प्रस्तुत गर्नेछौं।
अवश्य पनि यस कार्यक्रम वा मलाई मेसेज पठाउनुहोला!
कृपया मेसेज पठाउनु हुँदा शीर्षकमा "Life in Fukuoka Nepali" राखेर इमेल ठेगाना: 761@lovefm.co.jp मा पठाउनुहोला।
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.104
【ताकेनोको अर्थात् तामाको परिचय】
बाँसको मुनिको डाँठबाट निस्कने कलिलो भागलाई ताकेनोको अर्थात् तामा भनिन्छ।
ताजा भएको बेलामा नै खानु महत्त्वपूर्ण हुनाले यसलाई किन्नु भएमा सकेसम्म चाँडो पकाएर खाने गरौं। ताजा खनेको भएमा काँचै पनि खान सकिन्छ, तर सामान्यतया उमाल्न आवश्यक पर्दछ।
तताएर मात्र पनि खान सकिने प्रशोधन गरिएका ताकेनोको सुपरमार्केटहरूमा पाईन्छन्।
भित्रि भाग कलिलो भएकोले यसलाई उमालेर वा हल्का भुटेर वा टेम्पुरा गरेर खान पनि सकिन्छ।
यसको जरा कडा हुन्छ, तर यसलाई पातलो स्लाइसमा काटेर भात पकाउँदासँगै मिसाउनाले पनि स्वादिष्ट हुन्छ।
फुकुओका प्रिफेक्चर, ताकेनोकोको उत्पादन जापानभरिमा सबैभन्दा बढी हुने र डिसेम्बरदेखि मेसम्म लामो समयसम्म निर्यात गर्ने जापानको सबैभन्दा ठूलो उत्पादन क्षेत्र हो। विशेष गरी, किटाक्युशु शहर कोकुरा मिनामीकुको ओउमामा उत्पादन हुने ताकेनोको उच्च-स्तरीय खानाको रूपमा राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रसिद्ध रहेको छ।
【कानूनी परामर्श र मानसिक परामर्श अर्थात् व्यक्तिगत परामर्शको परिचय】
फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल सेन्टरमा रहेको फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल फाउण्डेसनमा फुकुओकामा बस्नु हुने विदेशीहरूका लागि निःशुल्क “कानूनी परामर्श” र “मानसिक परामर्श अर्थात् व्यक्तिगत परामर्श” प्रदान गर्दैआईरहेको छ।
“कानूनी परामर्श”, हरेक महिनाको पहिलो शनिबार, बिहान १०:३० देखि दिउँसो १:३० बजेसम्म र, तेस्रो बुधबारको दिउँसो १:०० बजे देखि ४:०० बजेसम्म, परामर्श अवधि ४५ मिनेट, बुकिंगको आधारमा वकिलद्वारा निःशुल्क परामर्श प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छI
मानसिक परामर्श अर्थात् व्यक्तिगत परामर्श, हरेक हप्ताको सोमबार, मंगलबार, र विहिबार, क्लिनिकल मनोवैज्ञानिकहरुद्वारा, अंग्रेजी वा जापानी भाषामा प्रदान गरिंदै आइरहेको छ।
【Mail Magazine को परिचय】
“Fukuoka City International Foundation Mail Magazine” भन्नाले, फुकुओकाको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्क्रिया गतिविधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्बन्धि समाचार, हरेक महिना अंग्रेजी र जापानी भाषामा सबैले लिन मिल्ने Mail Magazine हो।
वेबसाइटबाट सजिलै यस सेवाको लागि आवेदन दिन सक्ने भएकोले, कृपया "fcif" भनि खोजेर प्रयोग गर्नुहोला।
फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल फाउण्डेसनको सुचना सम्बन्धि, बुकिंग वा विस्तृत जानकारीका लागि फोन नम्बर ०९२-२६२-१७९९ मा सम्पर्क गर्नुहोलाI
सोमबारदेखि शुक्रबार, बिहान ९：०० बजेदेखि बेलुका १८：०० बजेसम्म काउण्टर खुल्ला रहनेछI